कोरोना लकडाउनले डेटिङ र यौन सम्बन्धलाई कसरी र कति परिवर्तन गर्दैछ ? - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २६, २०७७ समय: ११:५७:०४
राम्रा दिनमा त डेटिङ गर्न मुश्किल हुन्छ भने अहिलेको यस्तो समयको कल्पना गर्नुहोस् त जब संसारको एक चौथाई जनसंख्या लकडाउनमा बस्नु परेको छ ।
चीनदेखि ब्रिटेनसम्म, स्पेनदेखि नेपालसम्म । हरेक स्थानमा मानिसहरुले सामाजिक दुरीको अभ्यास गर्नुपरिरहेको छ । साधारणतया कुनै चिने जानेका व्यक्ति भेट्दा हामी जस्तो व्यवहार गर्दथ्यौं, अहिले त्यसको ठिक विपरित गर्नुपरेको छ ।
यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि लकडाउनका कारण संसारभरी डेटिङ र सम्बन्धमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
संसारका पाँच भिन्न शहरका पाँच व्यक्तिले बीबीसीसँग आ–आफ्नो डेटिङको कहानी साझा गरेका छन् ।
सोफी, २७ वर्ष, सांघाई, चीन
ऊहानमा लकडाउन हुनु एक हप्ताअघि मेरो प्रेमीसँग ब्रेकअप भएको थियो । त्यसपछि चीनका अन्य शहरमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइयो । कसैलाई थाहा थिएन, यस्तो स्थिती आउनेछ । यो मेरा लागि थप मुश्किल रह्यो किनभने मैले एक्लै आफ्नो ब्रेकअपको पीडा भोग्नु परिरहेको थियो ।
यस्तोमा मैले डेटिङ एप्सको सहारा लिएँ । आफ्नो अपार्टमेन्टमा आफ्नो बिरालोसँग बसेर डेटिङ एपलाई दायाँ बायाँ सार्नु मेरो लागि मनोरञ्जनको साधन बन्यो ।
म घण्टौंसम्म पुरुषहरुसँग कुरा गर्छु । कसैलाई भेट्नु अघि यही गर्ने हो । किनभने सबै रेष्टुरेन्ट र सार्वजनिक स्थान बन्द छन् । यदि खोलिएका क्याफे भेट्यौं भने पनि हामीले जतिबेला पनि मास्क लगाएर बस्नुपर्छ । यसरी डेटिङ जानुको कुनै अर्थ छैन ।
यस्तो लागिरहेको छ कि तपाईं पूर्ण रुपमा एक्लै हुनुहुन्छ र कसैले पनि तपाईंको एकान्त भंग गर्न सक्दैन । यो सुरक्षित पनि हो तर थुप्रै पटक तपाईं कोही साथी भए ठाउँ जान चाहनुहुन्छ र उसलाई छुन चाहनुहुन्छ, महसुस गर्न चाहनुहुन्छ । यो त्यतिबेला झनै मुश्किल हुन्छ जब तपाईं ती व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ र डेटिङमा हुनुहुन्छ । अनलाइन डेटिङमा त समस्या झन् बढ्छ, त्यो पनि कोरोनाभाइरसको समयमा ।
तपाईं एकदम अपरिचित व्यक्तिलाई कसरी भेट्नुहुन्छ ? जब तपाईंलाई आफूहरु दुबैजना कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनुहुन्छ वा हुनुुहुन्नँ भन्ने थाहा छैन भने यस्तो गर्नु थप जोखिमयुक्त हुन्छ ।
म अब डेटिङ एप्सबाट ब्रेक लिइरहेको छु किनभने यसबाट केही हासिल भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन । इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने स्थिती अहिले नै सामान्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
जेरेमी कोहन, २८ वर्ष, ब्रूकलीन, अमेरिका
आफ्नो अपार्टमेन्टमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा मैले आफूलाई व्यस्त राख्नका लागि वरिपरिको छतमा भएका व्यक्तिहरुको तस्बिर खिच्न सुरु गरेँ । मैले यस्ता तस्बिरमा आधारित फोटो सिरिज सुरु गरेँ ।
केही दिनअघि मैले एक युवतीलाई छतमा नुहाइरहेको देखेँ । म उनको ऊर्जाप्रति आकर्षित भएँ । म आफ्नो बालकनीमा गएँ र हातको इशाराले ‘हाय’ भनेँ । उनले पनि हातले इशारा गरिन् ।
मलाई त्यति नै बेला उनीप्रति कनेक्सन महसुस भयो र उनलाई सम्पर्क गर्ने मेरो इच्छा भयो । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ नि । मैले ड्रोन लिएँ र आफ्नो फोन नम्बरसहित एउटा नोट लेखेँ । त्यसलाई ड्रोनमा टाँसे र उनको छतमा उतारेँ ।
एक घण्टापछि उनको टेक्स्ट मेसेज आयो र हामीबीच कुराकानी सुरु भयो । मैले उनलाई सोधेँ र उनको रुममेटको मद्दतले डेट प्लान गरेँ । तर यो डेट एकदम भिन्न थियो । उनी आफ्नो छतमा थिइन् र म आफ्नो छतमा तर दुबैजना एकै तरिकाले बसेका थियौं – एउटा सानो टेबल, वाइन र खाना । यो डेटको क्रममा हामी पूरा समय फेसटाइम भिडियो कलमा थियौं । हामी एक अर्कालाई देख्न सक्थ्यौं र एक–अर्कालाई इशारा पनि गर्न सक्थ्यौं ।
हाम्रो दोस्रो डेट पनि अनलाइन बबलमा भयो । म वास्तविकतामा लाइन क्रस नगरिकनै लाइन क्रस गरेर नजिक पुग्न चाहन्थेँ ।
मैले आफ्नो कहानी सोसल मिडियामा पोस्ट गरेँ र यो भाइरल भयो । हामीलाई थुप्रै अन्तर्वार्ताका लागि अनुरोध आउन थाल्यो । यसको चाँजोपाँजो मिलाउँदा मिलाउँदै हामी एकअर्काको झनै नजिक आयौं ।
यदि लकडाउन नभएको भए यो सम्भव थिएन । म एक शानदार व्यक्तिलाई भेटेर निकै खुसी छु । साधारणतया म पहल गर्ने किसिमको मान्छे होइन । तर म एउटा कोठामा बन्द भएका कारण मेरो सृजनशीलताले उनलाई अप्रोच गर्न प्रेरित गर्यो ।
क्लारेसी, ३५ वर्ष, किनसासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो (डीआरसी)
कोभिड–१९ संक्रमण संसारभरीका लागि खतरा बन्नु अघि म कसैसँग क्याजुअल रिलेशनशिपमा थिएँ । हामी साधारणतया हरेक दिन एक–अर्कालाई भेट्थ्यौं तर म मानसिक रुपमा यो सम्बन्धमा त्यति सम्मिलत हुन चाहन्नथेँ । म यसलाई सुस्त गतीमा अघि बढाउन चाहन्थेँ । तर कसले सोचेको थियो होला र स्थिती यस्तो होला भनेर ।
यतिबेला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा लकडाउन छैन तर म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु । त्यसकारण यो भाइरसको खतरालाई गम्भीरताका साथ लिएकी छु । यो कुराले उनलाई पागल बनाइदिएको छ । मैले चार हप्ता अघि उनलाई भेट्न बन्द गरेँ । मैले उनलाई यसो गर्न जरुरी भएको भनेर सम्झाएँ तर उनलाई लाग्छ कि म उनीबाट टाढा हुन बहाना बनाइरहेकी छु ।
म उनको कमी महसुस गरिरहेको छु र मलाई पनि लाग्छ कि मैले आफ्नो जीवनमा उनलाई स्थायी रुपमा समावेश गर्ने एउटा मौका गुमाइरहेकी छु । उनले मेरो प्रतिक्षा गर्ने छैनन्, यो कुराले मलाई सताइरहेको छ । म शारीरिक अंतरंगको पनि कमी महसुस गरिरहेकी छु ।
हामी सबैलाई शारीरिक सम्बन्धको चाहना हुन्छ । यस्तोमा तपाईंले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो कुरा यो हो कि मेरो भाइब्रेटर सधैं मेरो बेस्ट फ्रेन्ड साबित हुन्छ । मलाई लाग्छ कि मेरा प्रेमीलाई यो थाहा थियो त्यसकारण मलाई लाग्छ कि उनले आफ्नो तर्फबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने बढी कोसिस गरेँ ।
यो स्थितीले मलाई दुःखी बनाएको छ र थुप्रै पटक एक्लो महसुस गराएको छ । अब मेरा प्रेमीले मसँग धेरै कुरा गर्दैनन् । मेरो मेसेजको जवाफ ढिला गरी दिन्छन् । म उनलाई र आफूलाई यो भाइरसबाट बचाउने कोसिस गरिरहेको छु तर मलाई लागिरहेको छ कि संकटको यो घडीमा हाम्रो सम्बन्ध पनि समाप्त हुनेछ ।
देबास्मिता, २४ वर्ष, नयाँ दिल्ली, भारत
मैले मेरा प्रेमीसँग तीन महिनाअघि डेटिङ सुरु गरेकी थिएँ । हामी एउटै शहरमा बस्छौं र यो कुराले मलाई ढुक्क बनाएको थियो । किनभने योभन्दा अघिका मेरा सबै लङ्ग डिस्टेन्स रिलेशनशिप थिए । म यो कुराले खुसी थिएँ कि म यस्ता व्यक्तिसँग छु जोसँग म धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन सक्छु ।
हामी एउटै अफिसमा काम गर्छौं र दैनिक एक–अर्कालाई भेट्थ्यौं । सबैकुरा एकदम ठिकठाक चलिरहेको थियो तर हाम्रो सम्बन्धमा अचानक लकडाउन आयो र यो पनि लङ्ग डिस्टेन्स रिलेशनशिपमा परिवर्तन भयो । हामी अत्यधिक दुःखी छौं किनभने हामी मानिसक रुपमा यसका लागि तयार थिएनौं ।
अब हामी एकअर्कासँग दिनमा ६–७ पटक भिडियो कलमा कुरा गर्छौं । हामी एक–अर्कासँग कुरा गर्दागर्दै एउटा फिल्म हेर्छौं । धेरैपटक हामी एकै किसिमका खाना बनाउँछौं । मलाई क्विज खेल्न मनपर्छ त्यसकारण हामी धेरैभन्दा धेरै अनलाइन क्विज खेल्छौं । यी तरिकामार्फत् हामी एक–अर्कासँग टाढा भए पनि एकैसाथ हुने कोसिस गर्छौं । तर यसले हाम्रो तनाव र चिन्ता बढाएको छ । अब हामी एक–अर्कासँग धेरै बहस गर्न थालेका छौं । जब एक अर्कासँगै हुँदा कुरा गर्दथ्यौं स्थिती अलग हुन्थ्यो । त्यतिबेला सम्झाउन सजिलो हुन्थ्यो र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ।
तर हामी यस्ता कुरामा अत्यधिक हाँस्छौं पनि । यदि हामी यो संकटबाट निस्कन सक्यौं भने मानिसहरुलाई सम्बन्धको सुरुवातमा नै कति ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो भनेर बताउनेछौं । मलाई लाग्छ कि यस्तो गुर्न पनि विशेष हुनेछ ।
जूली, २४ वर्ष, एलिगन सिटी, फिलिपिन्स
म पछिल्लो दुई महिनादेखि टिन्डरमा छु । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशमा लकडाउन लागू हुनुअघि म कुनै पुरुषसँग डेटमा जान्थेँ । हामीसँग पर्याप्त समय हुन्थ्यो त्यसकारण सबैकुरा गर्दथ्यो ।
अब मसँग समय नै समय छ तर म कसैलाई पनि भेट्न पाउँदिन । मेरो यौन जीवन निरश भएको छ । म कसैलाई पनि डेट गरिरहेको छैन । यो निराश गर्ने कुरा हो किनभने म आफ्नो शारीरिक इच्छा पूरा गर्नका लागि म केही पनि गर्न सक्दिनँ ।
यद्यपि, लकडाउनको क्रममा म डेटिङ एप्समा अत्यधिक सक्रिय छु । म पुरुषसँग कुरा गर्छु । हामी भिडियो कलमा कुरा गर्छौं र साइबर सेक्स पनि । यसमार्फत् हामी दुबैको यौन चाहना पूरा हुन्छ । यो सबै वास्तविक रुपमा हुँदैन तर हामीसँग योबाहेक विकल्प अरु के नै छ र ?
म यी पुरुषलाई भेट्न चाहन्छु तर यातायातका कुनै साधन छैनन् न घरबाट निस्कने अनुमती नै छ । मेरा त समस्या अझ धेरै छ किनभने म युनिभर्सिटीको डोरमेट्रीमा एक्लै बस्नु परिरहेको छ । यो समयमा सेक्स सम्बन्धको चाहना पनि धेरै नै महसुस भइरहेको छ । म हरेक दिन हस्तमैथुन गरिरहेकी छु । कहिले त दिनमा एकपटकभन्दा बढी । अब केही दिनसम्म यस्तै हुनसक्छ ।
काठमाडौँ / नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणकै बीच हामी नेपालीहरुको महान पर्व दशैँको माहौलमा छौँ । चाडप...
सम्भोगका सीमा र सर्तहरु
यौन सम्पर्क जिन्दगीको एउटा महत्वपूर्ण रमाइलो क्षण हो । यसलाई लिएर सबैको मनमा कैयौं किसिमका जिज्ञासाहरू समेत व्यक्त गर्ने...
नोबेलले गाउँ–गाउँमा पुगेर स्वाब संकलन गर्ने
विराटनगर / विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालले कोरोना परीक्षणका लागि गाउँ–गाउँमा पुगेर स्वाब संकलन गर्ने भएको छ । अस्पत...
अनशन तोड्दै डा. गोविन्द केसी (८ बुँदे सहमति सहित)
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै आइतबार (आज) उहाँले अनशन तोड्नुहुने भएको छ । विगत २७ दिन लामो...
विदेशमा रहेका एनआरएन स्वास्थ्यकर्मी नेपाल फर्केर सेवा गर्न तयार
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य आबश्यकः पूर्व मन्त्री यादव लण्डन/ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको...